irix [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/7/7df1a3b56f9b90299da5d63e420b52e2.xhtml failed
Irix dia OS ao anatin’ny fianakavian’ny Unix, izay namboarin’i SGI (Silicon Graphics Inc). Karazan’irony Unix proprietaire izy, izany hoe tsy an’ny daholobe ohatra ny Linux. Ny fampiasana azy araka izany dia mitovy amin’ny Unix rehetra ihany eo amin’ny baiko fampiasa, ny firafitry ny repertoire, na ny fanaovana config. Irix 6.5 izao no kinovany farany.
Solosaina SGI ihany no afaka ihodinan’ny Irix. Mampiasa karazana processeur hafa mihitsy ireo solosaina ireo, MIPS. Sady azo ampiasaina ho Server izy no azo ampiasaina ho milina hiasana. Multiuser, Multitache, Multiprocesseur ny Irix, fampiasa amina supercalculateurs mihitsy koa aza izy.
Misy GUI izy dia azo ampiasaina an-tsary koa, ankoatra ny andalam-baiko. Malaza matanjaka koa izy amin’ny telo rirana (3D) ka hoe fanaovana animations sy images de synthese hono. Fa betsaka koa ny fampiasana azy amin’ny kajy siantifika.
Vohikalan'i SGI , Unix
irix.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43